MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2013-09-29
KIA, တပ်ရင်း(၁၂) နှင့် တိုက်ပွဲတွင်အစိုးရတပ်မှ (၃)ဦးကျ
အောက်တိုဘာလ (၄)ရက်နေ့ (၁၁း၃၀) အချိန် မြန်မာ အစိုးရ စစ်တပ် (ခ.လ.ရ-၁၄၂) တပ် မှ ဗမာစစ်သားများ သည် ပန်ကောင်းမှုး ရွာမှ ရွာကော်မတီ ၀င်ဦးမောင်ထွန်းအား KIA, ၏လှုပ်ရှားမှု သတင်းများ မပေး ဟု အကြောင်းပြကာ ဖမ်း ဆီးနှိပ်ဆက် ခေါ်ဆောင် သွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
KIA,တပ်ရင်း (၁၂)၏ အုပ်ချုပ်ဒေသဖြစ်သော မဘိန်း နှင့် စင်းခန်းကြီး သို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာ သောမြန်မာ အစိုးရ စစ်တပ် (ခ.လ.ရ-၆၉) နှင့် (ခ.မ.ရ-၅၂၂) တပ် မှ စစ်ကြောင်း နှင့် KIA, တပ်ရင်း (၁၂)တပ်ဖွဲ့ ၀င်တို့အကြား ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ (၂၉) ရက်နေ့ တွင်ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ ရာ မြန်မာ အစိုးရစစ်တပ် ဘက်မှ (၅)ဦးထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိပြီး (၃)ဦး ကျဆုံးကြောင်း KIA, ရှေ့တန်း သတင်းရပ်ကွက်မှ သတင်းရရှိပါသည်။
at 10/05/2013 08:56:00 AM No comments:
ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၏ အကြိုညှိနှိုင်း ချက်များကို အစိုးရဘက်က လက်မခံပါက အောက်တိုဘာလတွင် နေပြည်တော်၌ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်နေသော တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအရ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး စာချုပ်လက်မှတ် ရေးထိုးပွဲ ပျက်ပြယ်ဖွယ် ရှိကြောင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ခေါင်းဆောင်များက ပြောကြားသည်။
at 10/05/2013 08:47:00 AM No comments:
at 10/05/2013 08:46:00 AM No comments:
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အောက်တိုဘာ ၅ ရက် (ယနေ့) တွင် သွားရောက်မည် ဖြစ်သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ယခုခရီးစဉ်သည် ၁၇ နှစ်ကြာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားပြီး ၎င်း၏ အစိုးရတက်လာပြီး နောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲများ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားလာခဲ့သည့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) နှင့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီတို့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးပွဲအတွက် ဆွေးနွေးရန် ရက်ပိုင်းအလိုတွင် ယခုလို သွားရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
at 10/05/2013 08:45:00 AM No comments:
at 10/04/2013 08:26:00 PM No comments:
2013 ning October (3) ya shani, shana maga hkying (05:00)pm aten daram hta KIA Masat (4) Dap Ba, Dap Dung (34) uphkang ginra rai nga ai, Man Lum hte Dak Lek lapran kaw, Myen Asuya Hpyen Dap maga na hpyen hpung ni hte Hpu Nau Balawng TNLA Hpyen Hpung ni gasat poi byin ai lam chye lu ai. Gasat poi byin ai shara hta Myen Asuya Hpyen Dap maga de na marai (3) hkrat sum ai lam chye lu ai.
at 10/04/2013 08:17:00 PM No comments:
ဂျေယန့်ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ပျက်စီးသွားသောနေအိမ်အချို့ကို ကရုဏာအဖွဲ့မှ ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးမည်
ကချင်ပြည်နယ် တရုတ်နယ်စပ် လိုင်ဇာ ရှိ ဂျေယန့်ဒုက္ခသည် စခန်း တွင် ပြန်လည်ပြုပြင် ရန် လိုအပ်နေ သည့် ဒုက္ခသည် အိမ်ထောင်စု (၇၀၀) အ တွက် အိမ်ခန်း အသစ်များအား မြစ်ကြီးနား ရိုမန် ကက်သလစ် ကရုဏာ အဖွဲ့ (KMSS)မှ ယခင်ထက် ပိုမိုကောင်း မွန်အောင်ဆောက် လုပ်ပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဂျေယန့် ဒုက္ခသည်စခန်း တာဝန်ရှိသူများ ထံမှသိရသည်။
အဆိုပါ ဒုက္ခသည်များနေထိုင်သော အိမ်ခန်းသည် လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ဆောက်လုပ်ပေးသောအိမ်ခန်းတန်းလျားများဖြစ်သောကြောင့် ယခုချိန်တွင် ပျက်စီးလာပြီး၊ ၄င်းထဲမှ အများစုဖြစ်သော မိုးကာဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားသည့်အိမ်ခန်းများကို အသစ်ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စခန်းအတွင်းရေးမှူး ကပြောသည်။
at 10/04/2013 08:16:00 PM No comments:
at 10/04/2013 04:08:00 PM No comments:
အစိုးရတပ်များ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA ရှိရာ နေရာအသီးသီးတွင် စစ်အင်အားတိုးချနေ
မြန်မာအစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ကြား အောက်တို ဘာလ တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး နိုင် ရန် နှစ်ဖက် နည်းပညာအဖွဲ့များ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေဆဲချိန် အစိုးရတပ် သည် တပ် အပြောင်း အလဲဖြင့် KIO နယ်မြေ ရှေ့ တန်းနေရာ များတွင် စစ်အင်အားများတိုးချဲ့နေကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာအစိုးရတပ်များသည် စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှ KIA တပ်မဟာ (၃)၊ တပ်မဟာ (၄)၊ တပ်မဟာ (၅) နယ်မြေများတွင် တပ်အပြောင်းအလဲဖြင့် စစ်အင်အားများ တပ်မံတိုးချဲ့နေကြောင်းသိရသည်။
at 10/04/2013 08:44:00 AM No comments:
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် အစိုးရနှင့် ကေအိုင်အိုတို့ မူဘောင်ကွဲလွဲမှု ရှိနေ
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကေအိုင်အို အလုပ်အဖွဲ့ရုံးတွင် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာနှင့် ကေအိုင်အို ကိုယ်စားပြု အလုပ်အဖွဲ့တို့ အောက်တိုဘာ ၃ ရက်တွင် ဒုတိယနေ့အဖြစ် ဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် မူဘောင်ကွဲလွဲမှု ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုအတွက် ကေအိုင်အို အနေဖြင့် လွန်ခဲ့သော အတွေ့အကြုံများအရ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲသာ အရင်ဆုံး လုပ်ဆောင်လိုပြီး အစိုးရ အနေဖြင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲပြီးမှသာ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် သွားလိုကြောင်း သိရသည်။
at 10/04/2013 08:42:00 AM No comments:
at 10/04/2013 08:41:00 AM No comments:
အောက်တိုဘာ ၈ ရက် ကနေ ၁၀ အထိ ကျင်းပဖို့ရှိ တဲ့ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ဆွေးနွေးပွဲမှာ အပစ်ခတ် ရပ်စဲရေးလက်မှတ် ထိုးဖို့ မသေချာသေး ဘူးလို့ ကချင်လွတ် လပ်ရေးတပ်မတော် (ကေအိုင်အေ) က ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု အဆင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးနဲ့ ငြိမ်း ချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ အတွက် ကေအိုင်အေ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင် မှု လုပ်ငန်း အဖွဲ့နဲ့ အစိုးရ ပြည်ထောင်စု အဆင့်ငြိမ်း ချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကော် မတီက လုပ်ငန်း အဖွဲ့တွေ မြစ်ကြီးနားမှာ ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးပွဲအပြီး ပြောဆိုလိုက်တာပါ။
at 10/03/2013 08:01:00 PM No comments:
ဒုက္ခသည် စခန်း တခုရှိ ကချင် စစ်ပြေး ပုန်းရှောင်များ
မြန်မာအစိုးရနဲ့ ကချင် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ ကေအိုင် အိုတို့ တဘက်မှာ ဆွေးနွေး ပွဲတွေ ပြုလုပ်နေပေမဲ့ တဘက်မှာ စစ်ပွဲလည်း ဆက်လက် ဖြစ်ပွား နေပါ တယ်။
အလုပ်အဖွဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကို ၈၊၉၊၁၀ တို့မှာ ပြုလုပ်မယ့် ပြည်ထောင်စု ဆွေးနွေးပွဲ အတွက် အကြိုညှိနှိုင်းမှု အနေနဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဘာတွေ ဆွေးနွေးမယ် ဆိုတာကို အကြမ်းဖျဉ်း သဘောတူညီချက် ရခဲ့တယ်လို့ မြန်မာ ငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာက ဦးလှမောင်ရွှေက ပြောပါတယ်။
at 10/03/2013 07:56:00 PM No comments:
at 10/03/2013 07:48:00 PM No comments:
အင်ခါးဂါးကျေးရွာ အဖြစ်အပျက်(KBC)ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အစီရင်ခံစာ
( post by KBC)
ပူတာအို ခရိုင်၊ အင်ခါးဂါးကျေးရွာ တွင် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ် ပွားနေကြောင်း သတင်းရရှိ သည့်နောက် ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်မှ သိက္ခာတော်ရ ဆရာခါးထုန်၊ ဒေါက်တာ လဟီ လာခါး၊ သိက္ခာတော်ရ ဆရာလမာယော်တို့နှင့် အတူ ပူတာအိုသာသနာနယ် အတွင်းရေးမှူး သိက္ခာတော်ရ ဆရာဇော်အောင်၊ သိက္ခာတော်ရ ဆရာဖုန်ဆိုင်း၊ သိက္ခာတော်ရ ဆရာကျမိုင်မင်းဂမ်နှင့် ဆရာမ ခေါန်ဂျာတို့ ပါဝင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ စက်တင်ဘာလ (၂၅-၂၉) ရက်နေ့အတွင်း အင်ခါးဂါးကျေးရွာသို့ သွားရောက်ကာ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
at 10/03/2013 07:46:00 PM No comments:
at 10/03/2013 07:25:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ်တွင်း စစ်ပွဲများကြောင့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဘက် အာရုံစိုက်မှုနည်းလာဟုဆို
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော စစ်ပွဲများ၊ ဒုက္ခသည်များ အရေးကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်တွင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ သော မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းအရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အာရုံစိုက် စိတ်ဝင်စားမှုနည်းလာကြောင်း မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်း တည်ဆောက်ခြင်း မပြုရန် ကန့်ကွက်ခဲ့သူ ကချင်ဒေသခံ ဒေါ်ခွန်ဂျာ က အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင် ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဆောက်လုပ်သော ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် စီမံကိန်း ပြန်လည်စတင်ရန် ကြိုးပမ်းနေမှုများ ရှိသည်ဟုလည်း ၎င်းကဆိုသည်။ လက်ရှိအနေအထားအရ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းများကို ကူညီဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်နေခြင်းကြောင့် မြစ်ဆုံဆည်ကိစ္စကို အရေးမပေးဖြစ် တော့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း ဒေါ်ခွန်ဂျာက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
at 10/03/2013 02:06:00 PM No comments:
at 10/03/2013 02:05:00 PM No comments:
at 10/03/2013 08:55:00 AM No comments:
ပျက်စီးသွားသော သဘာဝဝန်းကျင်များနှင့် ကြေမွသွားသော ကျောက်စိမ်းတုံးများ အကြောင်း (၁) (၂) (သတင်း၊ ဆောင်းပါး၊ ဓာတ်ပုံ)
ပျက်စီးသွားသော သဘာဝဝန်းကျင်များနှင့် ကြေမွသွားသော ကျောက်စိမ်းတုံးများ အကြောင်း (၁) (သတင်း၊ ဆောင်းပါး၊ ဓာတ်ပုံ)
ဒီနေ့ ရောက်ရှိလာတဲ့ ပုံတွေကို အမှတ်တမဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ ဘယ်နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်က တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းပုံတွေလဲပေါ့ Mega ယန္တယားကြီးတွေ အများအပြားနဲ့ ပုံတွေဆိုတော့ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် မျက်စိမှားစရာပါ...။ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေက တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တွေလို့ ထင်ရတဲ့ နေရာကတော့ ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့် ဒေသက ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းခွင် မြင်ကွင်း ဓာတ်ပုံတွေပါတဲ့...။ တိုးတက်နေတာလား ဆုတ်ယုတ်နေတာလား၊ သဘာဝဝန်းကျင်တွေ ပျက်စီးနေတာလား ဒီကရတဲ့ သယံဇာတတွေ ရောင်းရငွေတွေကြောင့် ကချင်ပြည်သူလူထု အကျိုးအမြတ်တွေကို ခံစားနေရလား၊ တိုင်းပြည်တိုးတက် ဖွံဖြိုးနေပြီလားဆိုတာ သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်...။
at 10/02/2013 09:09:00 PM No comments:
at 10/02/2013 08:17:00 PM No comments:
တရုတ်နယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်းများ တွင် ဆောင်းအ၀င် အရေးတကြီး အကူညီများလိုအပ်
ကချင်ပြည် နယ် တရုတ်နယ်စပ် တလျှောက် ကချင် လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ (KIO) ထိန်းချုပ် နယ်မြေရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းများ တွင် ဆောင်း ရာသီ ရောက်လာ သည်နှင့်အမျှ အအေးဒဏ်ကိုခံနိုင် သည့်စောင်များနှင့် ပျက်စီးနေသော ယာယီစခန်း များ ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် အရေးတကြီး လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း စခန်း တာဝန်ရှိသူများ ကပြော သည်။
ယခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်း UN မှ ကူညီထောက်ပံ့များ ၃ ကြိမ်ရရှိပြီဖြစ်သော်လည်း တရုတ်နယ်စပ် ဗန်းမော်ခရိုင် လွယ်ဂျယ် (Loije)၊ မိုင်ဂျာယန် (Mai Ja Yang)နှင့် ပန်ဝါ (Pangwa) ဒေသများတွင် ခိုလှုံနေသော ဒုက္ခသည်စခန်းများအတွက် ၄င်းတို့၏ယာယီတဲများပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးရန် အရေးပေါ်လိုအပ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း KIO ဒုက္ခသည်ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဆလန်ကဘာဒွဲပီဆာ (Salang Kaba Doi Pyi Sa) ကပြောသည်။
at 10/02/2013 07:29:00 PM No comments:
ဇိုင်းအောင်စခန်းရှိ ဒုက္ခသည် အယောက် ၂၀၀ ခန့်တွင် နှာစေး၊ချောင်းဆိုးဖြစ်ပွားနေ
ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်မြို့နယ် တရုတ်နယ်စပ် ဇိုင်းအောင် (Zai Awng) ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် လူကြီးလူငယ် အယောက် ၂၀၀ ခန့်တွင် အအေး မိ နှာစေး၊ ချောင်း ဆိုး ရောဂါဖြစ်ပွားနေပြီး ဆေးဝါးများအရေး ပေါ်လိုအပ်နေကြောင်း သိရသည်။
စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှ စ၍ဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်ပြီး လူနာများနေ့စဉ်မပျက် ဆေးခန်းသို့ ရောက်ရှိ လာကာ ယခုချိန် ၎င်းတို့အား ကုသပေးရန်ဆေးဝါးများ ပြတ်လပ်နေသည်ဟု ဇိုင်းအောင် (Zai Awng) ဒုက္ခသည် တာဝန်ခံ ဆရာ ဘရန်ဆန် KNG ကချင်သတင်းဌာန သို့ပြောသည်။
at 10/02/2013 07:27:00 PM No comments:
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအတွက် CPI ၏ EIA အစီရင်ခံစာ ချို့ယွင်းချက်များရှိနေ
မြစ်ဆုံ စီမံ ကိန်းနှင့် ပက်သက်ပြီး China Power Investment (CPI) ကုမ္ပဏီ ဘက်မှ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ အစီရင် ခံစာ (EIA) တွင် အားနည်း ချို့ယွင်းမှု များနှင့် ပြည်စုံ မှုမရှိသော ကောက် ချက်ချမှုများ တွေ့ရှိရသည် ဟု စိမ်းလန်း အမိမြေ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး အသင်းမှ ထုတ်ပြန် လိုက်သည်။
အဆိုပါ အသင်း က နိုင်ငံတကာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ သုံးသပ်ချက်များ ကို အခြေပြု၍ အထက်ပါ ကဲ့သို့ ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
at 10/02/2013 07:23:00 PM No comments:
at 10/02/2013 04:03:00 PM No comments:
Hkai Sun Lamu Ga Zing La Hkrum Ai Majaw Nam Tau Mare Masha Ni Jam Jau
Muse Ginwang, Pang Sai (Chyu Kote) Ginwang Daw, Nam Tau mare buga masha niahkai sun lamu ga ginra ni hpe N.A.HP asuya uphkang ten Mungdan Hkai Sun masing ngu ga baw hte yi sun lamu ga ginra Eka(338) daram hpe atik anang zing la wa sai lam dai mare buga masha ni kawn chye lu ai.
Ndai shara ni hta ya ten lakmat nlu tara nshang ai kumshu sun hpe maigan Miwa amyu sha ni galaw sha nga ai lam chye lu ai.
at 10/02/2013 03:47:00 PM No comments:
KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခွင့် ရ
KIO က ၄င်းတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း အစိုးရမှ သန်းခေါင်စာရင်း ဝင်ရောက်ကောက်ယူရန် သဘောတူလက်ခံလိုက်ကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမြင့်ကြိုင်က ပြော သည်။
၂ဝ၁၄ ခုနှစ် မတ်လ ၃ဝ ရက် တွင် အစိုးရက ပြန်လည်ဆောင်ရွက်သည့် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှု လုပ်ငန်းစဉ်၌ KIO က ပါဝင်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့ တပ်အခြေချစခန်း အပါအဝင် ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းရှိ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းနှင့် KIOထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း နေထိုင်ကြသူစာရင်း ကိုပါ ကောက်ယူခွင့်ပေးထား သည်ဟု ဦးမြင့်ကြိုင်ထံမှ သိရသည်။
at 10/02/2013 03:31:00 PM No comments:
မန်စီမြို့နယ်အတွင်း အစိုးရစစ်တပ်နှင့် KIO တပ်တို့ တိုက်ပွဲ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေသည်ဟု ဆို
ဗန်းမော်ခရိုင် မန်စီမြို့နယ်အတွင်း အစိုးရ၏စစ်တပ်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တို့ အောက်တိုဘာ နံနက်ပိုင်း ထိ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည်ဟု KIO နှင့် မုန်းဒိန်ပါ ဒေသခံတို့က ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ၂၉ ရက်မှ စတင်၍ အစိုးရ၏ တပ်ရင်းသုံးရင်းပါ စစ်ကြောင်း လှုပ်ရှားလာသဖြင့် KIA တပ်မဟာ (၃) လက်အောက်ခံတပ်ရင်း ၁၂ တပ်ဖွဲ့နှင့် ယနေ့ထိ သုံးရက်ကြာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ ခြင်း ဖြစ်သည်။
at 10/02/2013 02:34:00 PM No comments:
စစ်၏ သားကောင်များ၊ စစ်၏ ဇာတ်ကောင်များ၊ စစ်၏ ဇာတ်ညွှန်းဆရာများ
အချိန်ကာလကြာညောင်းလာသည်နှင့်အမျှ စစ်၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည်လည်း လိုက်ပါ ပြောင်းလဲလာခဲ့
သည်။ ထိုအခါ စစ်နှင့်ဆက်နွယ်လျက်ရှိသော အချက်အလက်များမှာ ပိုမိုရုပ်လုံးပေါ်လာကာ စစ်ကို လူတွေ ယခင်ကထက် ပိုပြီး နားလည်လာခဲ့ကြရ၏။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းငါးရာကျော်ခန့်အထိမူ စစ်သည်လူမျိုးများ တည်တံ့ရပ်တည်နိုင်ရေးကို အဓိက အာမခံသည့် အလုပ်အဖြစ် လူတို့ လက်ခံခဲ့ကြ၏။ လူမျိုးအသီးသီးသည် စစ်ဖြင့် မိမိလူမျိုး၏ ဥပဓိရုပ်ကို ပုံဖော်တတ်ကြပြီး ယင်းစစ်ဖြင့်ပင် မိမိတို့လူမျိုးရပ်တည်ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် ကျားကန်တည်ဆောက်ခဲ့ကြ၏။
at 10/02/2013 02:33:00 PM No comments:
at 10/02/2013 02:31:00 PM No comments:
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းထားမှု (၂) နှစ်ပြည့် ဆုတောင်းပွဲ အခမ်းအနား မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ကျင်းပ။
မြစ်ဆုံရေ ကာတာ စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်း ထားမှု (၂)နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ယနေ့ စက်တင် ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့ မြစ်ကြီး နားမြို့ သီတာနှစ်ခြင်း အသင်းတော်ရှိ ခန်းမဆောင် တွင် ဘာသာပေါင်း စုံ စုပေါင်းကာ ဆုတောင်း ပွဲကို ဂိုဏ်းဂန အသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကြောင့် ပြောင်းရွေ့ ခံရသည့် ဒေသခံ များ စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၂၀၀ ခန့်တက်ရောက် ကာ ကျင်းပခဲ့သည်။
at 10/02/2013 02:27:00 PM No comments:
at 10/02/2013 02:25:00 PM No comments:
မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းထားသည်ဟု ဆိုသော်လည်း ဒေသခံများစိုးရိမ်နေရဆဲ
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းအား အစိုးရမှ တရားဝင်ရပ်ဆိုင်းထားသောကာလ ၂ နှစ် ပြည့်နေသော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်ပိုရေးရှင်း (CPI)မှ လှုပ်ရှားမှုများ ရပ်သွားခြင်းမရှိသေးကြောင်း မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကျေးရွာနယ်မြေ ဒေသခံများကပြောသည်။
၄င်းကုမ္ပဏီမှကားများသည် မြစ်ဆုံစီိမံကိန်းရှိရာ ဒေသများသို့ မကြာခဏသွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ကာ၊ ဒေသခံများအားစည်းရုံးမှုများလည်းရှိနေကြောင်း ပြောနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
at 10/02/2013 09:34:00 AM No comments:
at 10/01/2013 07:52:00 PM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen Dap, Dai Lawn Rungamasing kata hpaw sharin ai Masat Yan (1/2013) ning hpyen laisat sara wunkat jawng yu ai hpawng hpe 2013 September (30) ya shani Hpyen Du Shalat Jawng, Woi Chyai Bum, Daru Magam Gawknu hta galaw ai lam chye lu ai.
at 10/01/2013 07:51:00 PM 91 comments:
at 10/01/2013 09:59:00 AM No comments:
ကေအိုင်အေ စစ်သုံ့ပန်းပေါ်လစီနဲ့ ပတ်သက်၍ ကျောင်းသားတပ်မတော် (ABSDF) ပြန်တစ်ဦး၏ ကုိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန်
1988ခုနစ် တောခိုတဲ့အခါ စစ်သင်တန်းတက်ဖို့ ဆိုပြီး ကေအိုင်အေ ဗဟိုဌာနချုပ်ရှိရာ လိုင်စင်ကိုအတက်။ ယခုလူသိများတဲ့ လိုင်ဇာနဲ့ လေးဆယ့်ငါ့မိနစ်ခရီး အကွာရှိ ကေအိုင်အေရဲ့ အမှတ်(၃)နည်းဗျူဟာဌာနချုပ် နောင်ရာပါစခန်းမှာ နားကြတယ်။ ကျနော်တို့ တောခိုကျောင်းသားတွေကို ဗိုလ်မှုးပန်းအောင် ကခေါ်ပြီး ညတွင်းချင်းပဲ ကြိုဆိုနုတ်ဆက်စကားပြောတယ်။ ပြီးတော့ ဗီဒီအိုပြပေးတယ်။ ပထမဆုံးကြည့်လိုက်ရတာက ကျနော်တို့ နောင်ရာပါမရောက်ခင် တပတ်လောက်က ဗန်းမော် မြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းပေါ်က ရင်ကွဲတောင်နားက ခြုံခိုတိုက်ပွဲကိုပြတယ်။ ကေအိုင်အေက ခလရ ၂၇က ဒုဗိုလ်ခင်မောင်အေးအပါအ၀င် စစ်သည်နစ်ဆယ်ကျော်နဲ့လက်နက်ပေါင်းနစ်ဆယ်ကျော်သိမ်းဆည်း ရမိတယ်။ မှတ်မိသေးတဲ့ ဗီဒီအိုက တကယ့်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဟာကိုရိုက်ထားတာ။ ခင်မောင်အေးကို ဖမ်းမိတော့ ကြွက်စုတ်ကလေးလိုပဲ ရွံ့တွေပွလို့ ။ ကင်မရာမင်းကမေးတယ် နံမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ အမောင်မင်းသားက ဟောလီးဝုဒ်ရိုက်တယ် ထင်လားမသိဘူး ဘိုလို I am Khin Mg Aye လို့ ဖြေသဗျ...။
at 10/01/2013 09:54:00 AM No comments:
(N-Gun Ja Wa)
အင်ခါဂါး ကို ကျွန်တော်တို့ ဘာသာရေး အဖွဲ့က သွားနိုင်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားတယ်။ ဒါပေမဲ့ မသွားနိုင်ခဲ့ ဘူး။ အင်ခါဂါး ဒေသ ကို သွားလာရေး အားလုံး ပိတ်ဆို့ထား ဟာ ဒီနေ့ စက်တင်ဘာ (၂၈) ရက်ဆိုရင် (၁) ပြည့်ပြီ။ သူ တို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းတွေ ကို အမျိုးမျိုးကြားနေ ရတယ်။ မချမ်းဘော့မြို့က ကြံခိုင်ရေး ပါတီတွေနှင့် ရ၀မ်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကော်မတီတွေလည်း အင်ခါဂါးဒေသခံတွေကို သွားရောက် ကူညီပေးဖို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေနဲ့ ညှိနိုင်းပြီး အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုလည်း အာဏာပိုင်တွေက ပေးမသွားခဲ့ဘူး။ တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး တစ်လပြည့်ဖို့ (၂) ရက်အလိုမှ ကျွန်တော်တို့သွားနိုင်ခဲ့တယ်။
at 10/01/2013 09:52:00 AM No comments:
ကချင်ပြည်မြောက် ပိုင်း ပူတာအို ခရိုင် ဆွမ်ပီယန်ကျေးရွာသို့ ဗမာအစိုးရ စစ်တပ် အင်အား (၂၀၀) ကျော် ခန့် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။ ထိုနည်းသူ ကချင်ပြည် ဗန်းမော်မြို့သို့ ကသာ သဘောင်္ဆိပ်မှ စက်တင်ဘာလ (၂၉) ရက်နေ့ ညနေ (၆း၀၀) နာရီဝန်းကျင်တွင် သဘောင်္နှစ်စီးဖြင့် ဗမာစစ်အင်အား (၄၀၀) ကျော် ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ကသာဒေသခံပြည်သူများ၏ သတင်းပေးပို့ချက်အရ သိရှိရပါသည်။ ဗမာအစိုးရသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပါးစပ်မှ တတွတ်တွတ်ပြောဆိုနေသော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ တိုင်းရင်းသား ဒေသများသို့ စစ်အင်အား အလုံးအရင်း ပို့ဆောင်နေလျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
at 10/01/2013 09:42:00 AM No comments:
ပူတာအိုခရိုင်၊ မချမ်းဘောမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်မျိုးအောင်သည် မချမ်းဘောမြို့ တစ်ဖက် ကမ်း နောင်ခိုင် ကျေးရွာ တွင် ခိုလှုံ နေသော စစ်ရှောင်စခန်း ကို ဒုက္ခပေးနေကြောင်းကြားသိရသည်။
at 10/01/2013 09:41:00 AM No comments:
at 9/30/2013 08:53:00 PM No comments:
ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မေတာ် (ကေအိုင်အေ) လုပ်ငန်းအဖွဲ့နဲ့ အစိုးရ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီတို့ လာမယ့် အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နဲ့ ၃ ရက်နေ့မှာ တွေ့ဆုံဖို့ရှိပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ ကေအိုင်အေ လုပ်ငန်းကော်မတီရုံးခန်းမှာပဲ တွေ့ဆုံမှာ ဖြစ်ပြီး လာမယ့် အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်ကေန ၁၀ ရက်အထိ ပြုလုပ်မယ့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲအတွက် ကြိုတင်ဆွေးနွေးတာလို့ ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးတော်ဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးလမိုင်ဂွန်ဂျာက ပြောပါတယ်။
at 9/30/2013 08:36:00 PM No comments:
at 9/30/2013 08:28:00 PM No comments:
ရှေ့ဆက် ဆွေးနွေး မှုများ တွင် တဖွဲ့ချင်း ဆွေးနွေး မှုဖြင့် သာ ခေါ်ယူတွေ့ ဆုံတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြီးခဲ့ သည့် စက်တင်ဘာ (၂၈) ရက်နေ့ မွန်ပြည် နယ် မော်လမြိုင်မြို့ တွင် တွေ့ဆုံ ခဲ့သော လက်နက် ကိုင် အဖွဲ့ အစည်း (၄) ဖွဲ့၏ တွေ့ ဆုံပွဲ၌ အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး လုပ် ငန်း ကော်မီတီ ဒုတိယ ဥက္ကဌ က ဆိုခဲ့သည် ဟု ယင်း အစည်းအဝေးကို တက်ရောက် ခဲ့သည့် ဒီမိုကရေစီ အကျိုးပြု ကရင့် အမျိုးသား တပ်မတော် (DKBA) ၏ ကိုယ်စားလှယ် ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှူးကြီး ဆန်းအောင်က ဆိုပါသည်။
at 9/30/2013 08:09:00 PM No comments:
at 9/30/2013 05:09:00 PM No comments:
KIA နှင့် အစိုးရတို့ ရရှိထားသည့် သဘော တူညီချက်များ ပြန်လည် သုံးသပ်ရန်ရှိ
လာမည့် အောက်တိုဘာ ပထမ အပါတ်တွင် ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ကိုယ်စားလှယ်များသည် အစိုးရ၏ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မီတီ အဖွဲ့နှင့် ရရှိထားသည့် သဘော တူညီချက်များ ပြန်လည် သုံးသပ်ကြရန် အတွက် ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့၌ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ကြရန် ရှိ သည်ဟု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ KIA နည်းပညာ အဖွဲ့၏ ပြန်ကြားရေး အရာရှိ ဆရာ ဒေါင်းခါးက ဆိုပါသည်။
“ ကျနော်တို့ ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ (၃၀) ရက်နေ့က သဘော တူထားတဲ့ အချက်တွေကို ပြန်လည် သုံးသပ်မယ်။ ပြီး တော့ ရှေ့ဆက် ဘယ်လို သွားမလဲ အပေါ်မှာ တင်ပြကြမှာ ဖြစ်တယ်။ အစိုးရ ဖက်ကတော့ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ဆွေး နွေးပွဲလို့ ပြောနေတာကတော့ သူတို့ကိစ္စပါ။ ကျနော်တို့ကတော့ မေ(၃၀)ရဲ့ ဒုတိယ အကြိမ် ပြန်လည် သုံးသပ်တဲ့ ဆွေး နွေးပွဲ သဘောဘဲ သတ်မှတ်ပါတယ်” ဟု ဆိုပါသည်။
at 9/30/2013 03:43:00 PM No comments:
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ၎င်း၏သမ္မတ သက်တမ်းကာလအတွင်း မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအား ရပ်ဆိုင်းကြောင်း တရားဝင်ထုတ်ပြန် ကြေညာထားသော်လည်း လက်ရှိကာလ၌ CPI ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအား ပြန်လည်စတင်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းနေပြီး နေပြည်တော်၌လည်း CPI ကုမ္ပဏီ၏ ရုံးခန်းတည်ဆောက်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ တော်ဝင်နှင်းဆီ ခန်းမ၌ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်က ပြုလုပ်သည့် ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းဒေသ ဖွံ့ဖြိုးမှု အဓွန့်ရှည်ရေးဆိုင်ရာ သုတေသနအဖွဲ့ (ARBRO) ၏ ဒုတိယအကြိမ် လူထုအကြံပြု အစည်းအဝေးမှ သိရသည်။
မြစ်ကြီး တစ်စင်းရဲ့ အဓိက ရှင်သန်မှုက ခရီးမိုင်ပေါင်း များစွာ၊ တောင် တန်းတွေ၊ တောအုပ်တွေ၊ ရှိုမြောင်တွေ၊ လွင်ပြင်တွေ၊ မြို့ရွာတွေ၊ အကွေ့ အကောက် ထောင်ပေါင်းများစွာ ကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းပြီး ပင်လယ် (သို့မဟုတ်) သမုဒ္ဒရာ ထံ ပေါင်းစပ်ခိုလှုံရခြင်းပါ၊ ပင်လယ်ထံ ရောက်အောင် မစီးဆင်းနိုင်တော့တဲ့ မြစ်ကြီးတွေ ကို သေဆုံးတယ်လို့ သတ်မှတ်ကြပါ တယ်၊ မြစ်ကြီးသေ ဆုံးသလို မြစ်ကို အမှီပြုရှင်သန်ကြတဲ့ ပြည်သူများရဲ့ ဘဝရပ်တည်မှုတွေလဲ အကြီးအကျယ် ပျက်ဆီးကြရတာပါ၊ သဘာဝတရားကြောင့်ဖြစ်စေ၊ လူတို့ရဲ့ ဖန်တီးမှုကြောင့်ဖြစ်စေ လူ့သမိုင်းတလျှောက်မှာ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ မြစ်ကြီးတွေအများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ်၊ လူ့ပယောဂကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ မြစ်ကြီး တစင်းကတော့ တရုတ်ပြည်က မြစ်ဝါမြစ် ကြီး (Yellow River) ပဲဖြစ်ပါတယ်၊
at 9/29/2013 08:43:00 PM No comments:
USA.သို့ ရောက်ရှိနေ သော ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF) အဖွဲ့ နှင့် USA,ရှိ(Kachin Alliance ) အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံ
မြန်မာ နိုင်ငံ မှ အမေရိကန်နိုင်ငံ ၊ တက် ဆက်စ်ပြည် နယ်၊ ဒါးလတ်စ် မြို့ သို့ ရောက် ရှိနေ သော ချင်းအမျိုးသားတ ပ်ဦး (CNF) အဖွဲ့ မှ ခေါင်းဆောင်များ (တာဝန်ရှိပုဂ္ဂုလ်) များ နှင့် ဒါးလတ်စ် ရှိ ချင်း လူထု တို့ ၏ ၂၀၁၃၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၈ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ပြုလုပ်သော တွေ့ဆုံ ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ချင်းအဖွဲ့အစည်းမှ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဒါးလတ်စ် ရှိ ကချင်( Kachin Alliance ) အဖွဲ့ အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူများ လည်း ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
at 9/29/2013 08:00:00 PM No comments:
အင်ခါဂါးကျေးရွာသို့ သြဂုတ်လ ၂၈၊ ၂၉ တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး တစ်လပြည့်ဖို့ (၂) ရက်အလိုတွင် ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်(KBC) နှင့် ရ၀မ်ရိုရားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုပါတီအဖွဲ့တွေ ပထမဦးစွာ သွားရောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုကျေးရွာသို့ သွားရောက်ခဲ့သည် ဆရာများမှ ပြောကြားချက်အရ အင်ခါဂါးကျေးရွာဒေသခံများ၏ အခြေအနေများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
at 9/29/2013 07:55:00 PM No comments: